Bedrock Linux: Nidaam Qaybsi Linux oo cajiib ah oo ka baxsan caadiga | Laga soo bilaabo Linux
Qoraallo badan oo ka mid ah Internet iyo Blog Laga Bilaabo Linux waxaa noo cadaatay, baaxadda soo jeedinta, beddelka iyo isticmaalka taas GNU / Linux Distros way gaari karaan. IYO BedrockLinux waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan xuduudahaas.
BedrockLinux waa horumar la taaban karo oo ka mid ah Software Free qaab ah GNU / Linux metadistribution taas oo asal ahaan u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda, ka ku raaxayso astaamo badan oo kala duwan, shaqeynaya ama faa'iidooyinka noocyada kala duwan ee loo qaybiyo GNU / Linux, kuwaas oo inta badan caadi ahaan ah "Iskuday", taasi waa, isma waafaqsana, gaar ahaan xagga xirmooyinka iyo amarrada.
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, BedrockLinux es:
"Una Linux metadistribution oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay adeegsadaan astaamaha qaybinta kale, oo sida caadiga ah ka wada dhexeeya. Asal ahaan, iyada, isticmaaleyaasha ayaa isku qasan kara iskuna dhejin kara qaybaha sida la rabo".
Laakiin dhab ahaan maxay taasi macnaheedu tahay?
Waxay ka dhigan tahay, tusaale ahaan, waana dacwadeenna wax ku oolka ah ee looga faa'iideysan karo qodobkan, waxaan yeelan karnaa a Qaybinta GNU / Linux MX Linux 19 o DEBIYAAN 10, rakibo BedrockLinux, iyo kan dambe, martigeliso Distro kala duwan oo ku habboon ama aan ahayn, sida Arch Linux, gudaha nooc ka mid ah weel loo yaqaan Stratum.
Si kastaba ha ahaatee, BedrockLinux aad hadda ku jirto nooca horumarinta, ka nambarka nooca 0.7, waxay taageertaa rakibidda GNU / Linux Distros soo socda: alpine, arch, centos, debian, devuan, exherbo, exherbo-musl, fedora, gentoo, ubuntu, void, and void-musl.
1.1 Maxaa kale oo Bedrock Linux awood u leh?
1.2 Sidee loo rakibaa Bedrock Linux MX Linux 19 iyo / ama DEBIAN 10?
Maxaa kale oo Bedrock Linux awood u leh?
Faahfaahin mid baa rakibi kara BedrockLinux on Distro casri ah oo si fudud u fuul:
Isticmaal CentOS jir / xasilloon ama DEBIAN qaybinta.
Ku rakib Arch Linux oo marin u hel baakadaha soo socda ama AUR repos.
Inaad awood u yeelatid isku-dubbarididda isku-darka xirmooyinka leh websaydhka 'Gentoo portage'.
Hel maktabadaha la jaanqaadka Ubuntu, sida barnaamijyada macaamiisha kumbuyuutarrada ku habboon.
Ku guuleysato waafaqsanaanta maktabadda CentOS, sida sheybaarka shaqada / softiweerka kumbuyuutarka loo adeegsado.
Ka mid ah fursado kale oo badan. Sidaas darteed, BedrockLinux asal ahaan waxay bixisaa awood ay ku raaxeysato waxaas oo dhan, isla mar ahaantaana, a "Nidaamka Howlgalka ee Wadajirka ah".
Sidee loo rakibaa Bedrock Linux MX Linux 19 iyo / ama DEBIAN 10?
BedrockLinux waxay si rasmi ah u taageertaa rakibideeda a Qaybinta GNU / Linux DEBIAN, oo ay ku jiraan nooca hadda jira, taasi waa, nooca 10 (Buster). Si kastaba ha noqotee, si rasmi ah uma taageerto rakibideeda MX Linux, nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda. Laakiin, kiiskeena wax ku oolka ah, sidaan horay u sheegnay, waxaan ku rakibi doonaa a Qaybinta MX Linux 19.1, 64-bit, taas oo iyaduna ku saleysan DEBIYAAN 10.
Soo dejiso oo socodsiiso Qoraalka Rakibaadda ee loogu talagalay Qaybinta DEBIAN - 32/64 jajab
Eeg casharka ama buugga adeegsiga ee laga heli karo Bedrock Linux
Helitaanka caawimaad ee xulashooyinka amarka Bedrock Linux iyo xuduudaha
Ku socod amarrada aasaasiga ah Bedrock Linux
Qor liiska GNU / Linux Distros ee la heli karo si loo rakibo
Ku rakib GNU / Linux Arch Distros
Ansixi amarrada ama baakadaha loo yaqaan 'Distro' kasta (Saldhigga iyo Tusmada)
Tusaalooyinka fulinta fulinta Arch Distro lagu rakibay Bedrock Linux
Cusboonaysii saldhigga Arch
Ku rakib baakado kala duwan saldhigga Arch
Tafatir Faylka Qaabdhismeedka Meelaha Lagu Kordhiyo Arch AUR Repos
Ku dar jajabka qoraalka soo socda dhamaadka feylka qaabeynta:
Kaydi oo ka bax feylka qaabeynta.
Ku rakib xirmo Arch AUR Repos oo leh git
Xaaladda Arch iyo suurtagal ahaan Distros kale oo la rakibo, iyagu waa sawirada saldhigyada rakibida ugu yar, hubaal waa inay ahaadaan ku habboon oo u habeeyay adeegsadaha si loo gaaro isku dheelitirnaan iyo adkeyn iyaga ka mid ah, adoo ku rakibaya xirmooyin isla markaana ku sameynaya qaabab kala duwan faylasha qaabeynta.
Inaad naga taageerto rakibida BedrockLinux waad hubin kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka, iyo in la arko waxa GNU / Linux Distros waxaa loo isticmaali karaa si loo rakibo, waxyaabaha soo socda isku xirka. Iyo in la ogaado nooca rakibaadda nooca 0.7 ee la heli karo, kuwa soo socda isku xirka.
Tallaabooyinkan ka dib, waad xamili kartaa Arch Linux deggan ee dhadhanka isticmaalaha, ka MX Linux 19 o DEBIYAAN 10isticmaalka BedrockLinux.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan tan cajiibka ah iyo xariifnimada «Distro Linux» wac «Bedrock» maxaa na siiya inaan ku raaxeysano «lo mejor de muchas distros» hal keli ah, ayaa dan iyo faa iido weyn u leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Bedrock Linux: A Metadistribution Linux qurux badan oo caadi ka ah
Aniga oo xiiso leh, waxaan aad u xiiseynayaa tan inaan awood u yeesho MInt iyo Centos inay wada yeeshaan, si toos ah faboritos.
Maqaal weyn, mahadsanid
Waad salaaman tihiin sidee tahay dijo
content wanaagsan broooo
Ku jawaab Holaqtal
content wanaagsan xikmad
Google ayaa horey u sii deysay nooca Horudhaca ah ee Android 11 waana kuwan warkeeda